မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထိခိုက်နိုင်သော Dopamine ups and downs: neurodevelopmental model (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
စှဲဖို့အားနည်းချက်အတွက် Dopamine အတက်အကျ: တစ် neurodevelopmental မော်ဒယ် (2014)
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2015 ဇွန် 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2014 ဇွန်; 35 (6): 268-276 ။
2014 ဧပြီ 30 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.tips.2014.04.002
Marco Leyton, Ph.D ဘွဲ့ကို1,2,3,4,* နှင့် ရှင်ပေါလု Vezina, Ph.D ဘွဲ့ကို5,6
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ
စွဲလေ့ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ပြဿနာများအားဖြင့် presaged နေကြသည်။ များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ဤအရာကားထကြွလွယ်သောစွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေ၏အစောပိုင်းစကားရပ်, လူမှုရေး gregariousness နှင့်အတိုက်အခံအပြုအမူနှင့်အတူစတင်သည်။ ကျနော်တို့ကဤအစောပိုင်းကွဲပြားခြားနားသရုပ်အပြုအမူချဉ်းကပ်နည်းကလှုံ့ဆော်ပေးကြောင်း dopamine လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်ဖို့စိတ်ခံစားမှုအဓိကလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမြင့်စွမ်းရည်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းဤနေရာတွင်တင်ပြသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းအစပျိုးသည်ဆိုပါကဤမှာ-အန္တရာယ်လူငယ်လည်းမူးယစ်ဆေး-တွဲတွေကိုမှမြင့်တုံ့ပြန်မှုဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ အေးစက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင်ာင်းမှတဆင့်ဤသက်ရောက်မှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်စုပြုံအခြားဆုလာဘ်များကရူးနှမ်းသောသူတို့အားကျော်လွန်ကြောင်းတုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, တွေကိုနောက်ထပ်မူးယစ်ဆေးနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်အကြားခြားနားချက်ကိုအလေးအနက် ပြု. , နှိုင်းယှဉ်အောက်ပိုင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူတွဲဘူး။ အတူတကွဤတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဟန့်တားဖြစ်စဉ်များမူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အချိုးအစားမညီမျှမှုစိုးရိမ်ပူပန်မှုဆီသို့တစ်ဦး Pre-ရှိပြီးသားအားနည်းချက်ခုတ်မောင်း။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်သက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
keywords: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, အရက်အလွဲသုံးမှု, ဆုကြေး, အခြေအနေများ, အသိ, ယ့ Salience, Externalizing, Allostasis
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်၏အရေးပါသော neurodevelopmental မော်ဒယ်
မူးယစ်ဆေးစွဲယနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းထိခိုက်အများဆုံးပျံ့နှံ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ, လူမှုရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ် [မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသေဆုံးမှု 12% အထိပံ့ပိုးအတူကြီးမားတဲ့များမှာ1] နှင့်တစ်ဦးတည်းအမေရိကန်အစိုးရတစ်နှစ်လျှင်ခန့်မှန်းခြေ $ 400 ဘီလျံအထိကုန်ကျ [2-3].
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကြိုးစားကြသူတွေကိုသာလူနည်းစုတစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (Sud) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောကြောင့်, ကြိုးစားမှု neurobiological features တွေ predisposing ဖော်ထုတ်ရန်ကြပြီ။ တဦးတည်းရှည်လျားစဉ်းစားအယူအဆ [တိုးလာလွယ်ကူစွာထိခိုက်သည့် mesolimbic dopamine စနစ် preexisting ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းထင်ဟပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ4] ။ သို့တိုင်သော်လည်းအခြေအတင်ဆွေးနွေး [ဤအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနောက်ဆုံးတွင်ပြိုင်ဘက်-လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆုလာဘ်ချို့တဲ့မော်ဒယ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, dopamine လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားအဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဖြစ်ပါသည်5-6], သို့မဟုတ်မက်လုံးပေးာင်းမော်ဒယ်များ၌ရှိသကဲ့သို့ကြီးထွား dopamine လှုပ်ရှားမှု [7-8] ။ ပစ္စုပ္ပန် neurodevelopmental မော်ဒယ်သည်ဤအင်္ဂါရပ်များတစ်ဦးချင်းစီပေါင်းစပ်။ ဒါဟာ mesolimbic dopamine စနစ်များအတွက် hypo- နှင့် Hyper-လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးအတွက်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍကိုအသိအမှတ်ပြုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသံထွက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဖော်ပြထားပါတယ်။
လူ့မြီးကောင်ပေါက်အတွက်လေ့လာမှုများ, ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များကနေသက်သေအထောက်အထားဆုံအောက်တွင်အကျဉ်းချုံးအဖြစ်လူငယ်စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်လှုံ့ဆော်မှုမှကြီးထွား dopamine တုံ့ပြန်မှုပြကြောင်းအကြံပြုထကြွလွယ်သော, ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိုးလာလွယ်ကူစွာထိခိုက်မှာဖြစ်တယ်။ ဤအအပြုအမူတွေကိုကနဦးတွင်မတူကွဲပြားသော Non-မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုပစ်မှတ်ထားနိုင်ပေမဲ့, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏စတင်မူးယစ်ဆေးအေးစက်အရေးကြီးတဲ့မှဦးဆောင်မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုဆီသို့ကြီးထွား dopamine reactivity ကို steers ။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုအားဖြင့်ဤသူလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မှာ-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အာရုံကိုအာရုံတိုးပွားလာခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရယူသည်မူးယစ်ဆေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-တွဲတွေကိုမှဦးနှောက် dopamine တုံ့ပြန်မှုထပ်မံမြှင့်တင်ရန်။ Non-မူးယစ်ဆေးတွဲတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနှိုင်းယှဉ်အောက်ပိုင်း dopamine တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်လာသောကြောင့်, ခြုံငုံရလဒ်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေနှင့်တစ်ဦး Sud များအတွက်ဇာတ်စင် setting တစ်ဦးကျဉ်းအပြုအမူ repertoire ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကမော်ဒယ် (မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏တစ်ခုတည်းသောအချက်သီအိုရီကနေထွက်ခွာကိုယ်စားပြုတယ်စားပွဲတင် 1) ။ hypo- နှင့် Hyper-dopamine Active နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းနှင့်သက်သေပြ predisposing အချက်များနှင့်အတူဤပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုပုံပစ္စုပ္ပန် neurodevelopmental မော်ဒယ်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးထက်ပိုသောပြည့်စုံသောစာရင်းကိုင်ပေးပါသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့အဆိုပြုလည်းပိုကောင်းပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကုထုံးမဟာဗျူဟာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကြောင်းကြားရန် positioned ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုတိုးတက်ထကြွလွယ်သောဆုလာဘ်-ရှာခြင်းနှင့် dopamine Response
မကြာသေးမီကကလေးမွေးစားခြင်းစီးရီး, အမွှာနှင့် longitudinal နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများတစ်သိသိသာသာတသမတ်တည်းကောက်ချက်ကိုထောက်မပြီ: အများအပြားကျင်းပေါင်း [ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အန္တရာယ်များစိတ်လှုပ်ရှား-ရှာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ '' externalizing '' လမ်းကြောင်း, လူမှုရေး gregariousness, နှင့်အတိုက်အခံသဘောထားတွေ၏ရလဒ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်9-19] ။ ဤအဓာတ်အခြေခံအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များ [အသီးသီးတွေကိုဆုချခြင်းနှင့်ပြစ်ဒဏ် related ဖို့ကြီးများနှင့်အောက်တွင်-sensitivity ကိုထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားနေကြ20-22] ။ ဥပမာအားဖြင့်မြင့်မား external စရိုက်များနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက် [ဆုံးရှုံးမှုပိုမိုမြင့်မားများမှာလျှင်ပင်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဆုလာဘ်ပိုနှစ်သက်, အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအောင်23-25].
ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက်မှတ်သားတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု [ကိုလည်းဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များတွင်တွေ့မြင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အလွယ်တကူမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပြုအမူတွေဖွံ့ဖြိုးကြသည်မဟုတ်26] ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်ရဲ့အကောင်းဆုံး-ဖော်ပြထားခန့်မှန်းတစ်ခုမှာဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာလေ့လာစူးစမ်းဖို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောသဘောထားဖြစ်ပါသည် [26-29] ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆည်းပူးသောသူတို့တိရစ္ဆာန်များအနက်တစ်ခုသာအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်မူးယစ်ဆေးပိုမိုလုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေဖြင့်သတ်မှတ်သကဲ့သို့, compulsive အသုံးပြုရန်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ရရှိရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များသည်းခံတာရှည်ပျမ်းမျှထက် [များအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာကြံအတွက်ဆက်လက်ရှိပါလိမ့်မယ်30-31] ။ ဤ "compulsive" မူးယစ်ဆေးဝါးကို အသုံးပြု. ကြွက် [ထိုကဲ့သို့သောတွေကိုတုံ့ပြန်အချိန်မတန်အဖြစ် Impulse မြင့်မားအသစ်အဆန်း preference ကိုနှင့်ပုံစံများဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည်32].
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူတွေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါအမူအကျင့်စရိုက်များနဲ့အခြားအကျိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် dopamine ဆဲလ်တုန့်ပြန်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့သဘောထားနှင့်အတူပူးတွဲခြားနားသည်။ ကြွက်များတွင်ကွဲပြားခြားနားစိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်အတွက်အခြေခံများနှင့်ဖြန့်ချိမှာပစ်ခတ်မြင့်မားသော dopamine ဆဲလ် [ သာ. ကြီးမြတ်အသစ်အဆန်းတူးဖော်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်း29,33] သာ. ကြီးမြတ်သကြားနို့တိုက်ကျွေးရေး [29,34] ပို. မက်လုံးပေးသင်ယူခြင်း  နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုလျင်မြန်စွာဝယ်ယူ [4,29,36-38] ။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများရုံဆက်စပ်မှုထက်ပိုပါတယ်။ Dopamine agonists Impulse ၏စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းအချိန်မတန်မီတုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်နှင့် (ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင်အခွအေနေမှီခိုဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ကျယ်ပြန့ထောင့်ကွက် 1).
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအန္တရာယ်များ, ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေအစွမ်းထက် dopamine ကလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤအအပြုအမူတွေ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကို Anatomical ခွဲဖြာနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုလေ့လာတဲ့ဆုလာဘ်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့စိတ်အားထက်သန်, အနီးကပ် ventral striatum, amygdala နှင့် anterior cingulate အတွက် dopamine ဂီယာကလွှမ်းမိုးဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေ [ဖြစ်ပါသည်7-8,39-44] ။ Dopamine လည်း [အချိန်မတိုင်မီတွေကိုဆုချတုံ့ပြန်ရန်စိတ်သဘောထားအပေါ်သက်ရောက်မှု45], အ striatum အတွက်ဆိုးကျိုးများထင်ဟပ် , အ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ဆိုးကျိုးများထင်ဟပ်, ပိုကြီးတဲ့အကျိုးသည်နှောင့်နှေးသည်းခံဖို့စိတ်အားထက်သန် [42-43,47] နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ဆိုးကျိုးများထင်ဟပ်တာဝန်နှင့်အတူအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှု  ။ သက်သေအထောက်အထားများ၏အလေးချိန် [dopamine အပျော်အပါးမှနီးကပ်စွာဆက်စပ်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြု7,48].
လူသားများတွင်အပြုအမူတွေ externalizing အတွက်လွန်းတစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု dopamine တုန့်ပြန်အတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့လူကြီးတွေမှာပိုမို striatal dopamine တုန့်ပြန်အသစ်အဆန်းရှာနှင့်အတူပူးတွဲကွဲပြား [49-50] နှင့်အခြား Impulse related စရိုက်များ [50-52] ။ fMRI လေ့လာမှုများများတွင်အလားတူရလဒ်တွေကိုမြင်ကြရသည်။ အန္တရာယ်များအပြုအမူဖို့စိတ်သဘောထား သာ. ငွေကြေးဆုလာဘ်ပေးရန် striatal တုံ့ပြန်မှု [ သာ.53-55] ။ [အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်စေတုံ့ပြန်မှုရမှတ်မြင့်မား, ငွေကြေးဆုလာဘ်မျှော်လင့်ဖို့ striatal တုံ့ပြန်မှု သာ.56] ။ ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေနှင့်အတူတွဲတွေကိုရန် striatal တုံ့ပြန်မှု သာ. , ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်သည်ဤတွေကိုနှစ်လအကြာမှာရွေးကောက်တော်မူလိမ့်မည်  ။ ထိုအခါ သာ. ကြီးမြတ်နောက်ဆက်တွဲခြောက်လမှာစားနပ်ရိက္ခာနှင့်လိင်, သာ. အလေးချိန်အမြတ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေဖို့ striatal တုံ့ပြန်မှုနောက်ပိုင်းတွင် .
dopamine ဂီယာကြိုးကိုင်တူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအများအပြားပွောငျးလဲကတည်းကလူသားတွေအတွက်အထက်ပါအသင်းအဖွဲ့များ [ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြ59-61] ။ လျှော့ချ dopamine ဂီယာ corticostriatal functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု disrupts  ထိပ်တန်းချ cortex နေဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ striatum သက်ဝင်စေဖို့ဆုလာဘ် related တွေကိုနိုင်စွမ်း [63-64] ။ ဤရွေ့ကား neurophysiological သက်ရောက်မှု [ဦးစားဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ရန်လျော့နည်းသွားအမူအကျင့်စိတ်သဘောထားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်65-67] နှင့်အရက်အပါအဝင်ဆုလာဘ်, ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရေရှည်တည်တံ့ဖို့လျော့နည်းသွားလိုလိုလားလား  ဆေးရွက်ကြီး  နှင့်ငွေ  ။ dopamine function ကိုခြီးမွှောကျ, နှိုင်းယှဉ်လျှင် [အပြုအမူရွေးချယ်မှုလမ်းပြဆုလာဘ် related တွေကိုနိုင်စွမ်းကိုတိုးပွားစေ65], [မြင့်အနိမ့်တန်ဖိုးကိုဆုလာဘ်များအကြားခွဲခြားနိုင်စွမ်းမှေးမှိန်71] နှင့်ကမ်းပါးမတ်ယာယီလျှော့, ပိုကြီးတဲ့, ပို distal သူတွေကိုကျော်ချက်ချင်းမရရှိနိုင်သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်များအတွက်ဦးစားပေးသဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော Impulse တစ်ပုံစံ induces  ။ လက်တွေ့လူဦးရေအတွက်, schizophrenia နှင့်အတူလူနာ - တစ် Hyper-dopamine ရောဂါစဉ်းစား - [ဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြဿနာများ၏အလွန်မြင့်မားမှုနှုန်းများ73ဘာမှမပါလျှင်] ပါကင်ဆန်ရောဂါပြပွဲနှင့်အတူရှိသူများအနေဖြင့်, [ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှုန်းထားများလျော့ကျ60] ။ အမှန်စင်စစ်စီမံခန့်ခွဲပါကင်ရဲ့လူနာ dopamine agonist ဆေးဝါးများ [ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း, Hyper-လိင်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခု dysregulation syndrome ရောဂါ, သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်60].
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများစတင်အောက်ပါ Hyper- နှင့် hypo-dopamine လှုပ်ရှားမှု
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကစတင်ခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့သက်ရောက်မှုအချို့ထိခိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်; ဆိုလိုသည်မှာ ယခင်ကထိရောက်မှုအနိမ့်ဆေးများသည်ယခုအခါတစ်ဦးတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးယခင်ကထိရောက်သောဆေးများပိုကြီးတဲ့တုံ့ပြန်မှုထုတ်ယူ။ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး regimen [မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အမူအကျင့်ကို Activation, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုရေရှည်တည်တံ့ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်လိုလိုလားလားနှင့် သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးတက်သောတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်7-8].
ာင်းထုတ်လုပ်ရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိအဆိုပါအခြေအနေများလူသားတွေအတွက်အစောပိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပုံစံများနှင့်ဆင်တူ: တူညီသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်ဆိတ်ကွယ်ရာရက်ပေါင်းယူမြင့်မားသောဆေးများအလယ်အလတ်မှမျိုးစုံထိတွေ့မှု။ ဤအခြေအနေများကလူ့သုတေသနအတွက် simulated ခဲ့ကြသည့်အခါမူးယစ်သွေးဆောင်ာင်း သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ပိုမို energizing သက်ရောက်မှုအပါအဝင်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး [74-76] ။ ဤသည်ပင်ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ကြီးသားအပေါင်းတို့, ဘာသာရပ်များအတွက်လုပ်ခဲ့ပြီးတုံ့ပြန်မှုပြဘဲ, မှတ်ချက်ချသည်။ ကြွက်များတွင်, သတိထား [ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာမှမြင့်မားသော reactivity ကိုပြသောသူတို့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပိုပြီးဖွယ်ရှိသည်27,33] ။ လူသားမြားသညျတှငျ, dopamine ာင်း [မြင့်မားသောအသစ်အဆန်းရှာရမှတ်များနှင့်အတူရှိသူများအတွက်ကြီး74].
ထပ်ခါတစ်လဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးလည်းအေးစက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်; ဆိုလိုသည်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတွဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှု [အပြုအမူ activation, dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပါအဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသူ့ဟာသူကဲ့သို့တူညီသောသက်ရောက်မှုအများအပြားထုတ်ယူထံသို့မလာနိုငျ77-81] ။ ဤအအေးစက်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေများာင်းကိုဆွဲထုတ်ဘို့သူများကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။ ထိုမှတပါး, တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု [လည်းသိသာများမှာ82] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင့်မားသောအသစ်အဆန်းရှာဖွေစူးစမ်းကြွက် [ကင်းတွေကိုနှင့်အတူပိုမိုတက်ကြွစွာထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်မျိုးသုဉ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါမူးယစ်ဆေး-ရှာ၏ cue-သွေးဆောင် reinstatement ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်များမှာ83].
များလွန်းသောလူသားမြားတှငျ, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အတူတွဲတွေကို [တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပါအဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး, ကဲ့သို့တူညီသောသက်ရောက်မှုအများအပြားထုတ်ယူထံသို့မလာနိုငျ84] conditional ရာအရပ်ကိုဦးစားပေး [85-86] သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာ  နှင့် dopamine လမ်းကြောင်း activation [88-89] ။ cue-သွေးဆောင် dopamine အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု  နှင့်တဏှာတုံ့ပြန်မှုရှုမြင်ကြသည်  နှင့်အချို့သောသက်သေအထောက်အထားဒီရိုကိုထင်ဟပ်နိုင်အကြံပြု .
အဆိုပါ cue-သွေးဆောင်သက်ရောက်မှုအထူးသဖြင့်စွဲလမ်းများအတွက်အန္တရာယ်မှာဘာသာရပ်များအတွက်မှတ်သားခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အန္တရာယ်မှာမိုးသည်းထန်စွာသောက်များတွင်အရက်နှင့်ဆက်နွယ်တွေကို [တဲ့မြင့် electroencephalogram (EEG) P300 signal ကို, စိတ်ခွန်အားနိုး salience တစ်ခုအညွှန်းကိန်းသွေးဆောင်90] ။ fMRI လေ့လာမှုများအတွက်မြင့်မား external မြီးကောင်ပေါက် [သည့် ventral striatum အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များထက်ငွေကြေးဆုလာဘ်အကြောင်းကြားစာပိုမိုတုံ့ပြန်မှုကိုပြသ54] ။ အလားတူပင်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များ [နျူကလီးယပ် accumbens နှင့် mesocorticolimbic circuit ကိုတခြားရှုထောင့်များတွင်အရက်နှင့်ဆက်စပ်တွေကိုမှပိုကြီးတဲ့တုံ့ပြန်မှုပြ91-93] ။ အဆိုပါအရက် cue-သွေးဆောင် striatal activation အမှန်စင်စစ်မိုးသည်းထန်စွာသောက် (ဎ = 326) ၏ကြီးမားသောလေ့လာမှုမှာ, အရက်သုံးစွဲခြင်းပြဿနာများ၏ပြင်းထန်မှု သာ. , သာ. [94-95] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား [ဘီယာတစ် subpharmacological အရသာအရက်အသုံးပြုမှုမမှန်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက်မဟုတ်ဘဲအနိမ့်အန္တရာယ်သောက်များတွင်သိသာထင်ရှားသော striatal dopamine တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြု96].
ရှေ့မှောက်တွင် vs။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်တွေကိုနှင့်အခင်းအကျင်းများမရှိခြင်း [အခြားအဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်ရန်အဆင်သင့်ပြုပြင်နိုင်သည်76,97-99] ။ သဘာဝဆုလာဘ်ယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတွဲနေတဲ့အရပျ၌ပေးအပ်လျှင်, တိရိစ္ဆာန် [ဒီသဘာဝကဆုလာဘ်နှင့်အတူညျခှနျအားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပြပါလိမ့်မယ်82,100] ။ ပိုပြီးပုံမှန်အားမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမူးယစ်ဆေးကိုလက်ခံရရှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်တင်ပြနေတယ်ဆိုရင်, မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေတိုးပွားလာကြနေကြသည် [77,81,101]; မူးယစ်ဆေး, dopamine ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအုပ်ချုပ်လျှင်  နှင့်အမူအကျင့်ာင်း enabled ဖြစ်ပါတယ် [102-103] ။ ပြောင်းပြန်အတိအလင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များမရှိခြင်းနှင့်အတူတွဲတွေကို [တက်ကြွစွာ dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့ကျလာ, အစွမ်းထက် inhibitory သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်104] အမူအကျင့်ကို Activation [97,102-103,105-106] အဖြစ်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေနှင့် reinstatement [107-108].
အတိအလင်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များမရှိခြင်းနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းကောင်းစွာလူသားတွေအတွက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်မကြာသေးမီကအထောက်အထားများကို inhibitory ဖြစ်စဉ်များစေ့စပ်နိုင်အကြံပြုထားသည်။ Non-မှီခိုဆေးလိပ်သောက်စီးကရက်တွေကိုနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်တဲ့အခါမှာဥပမာ, တဏှာရမှတ်အခြေခံအထက်တွင်သိသိသာသာတိုးတက်သဖြင့်, အတိအလင်းစီးကရက်၏မရှိခြင်းနှင့်အတူတွဲတွေကိုတင်ဆက်မှု, နှိုင်းယှဉ်အတွက်သိသိသာသာအခြေခံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတဏှာလျော့နည်းသွား  ။ ဤအလျော့သက်ရောက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားလည်းဦးနှောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြပွဲမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုထက်ထိုကဲ့သို့သော erotica အဖြစ်အပြုသဘောမဟုတ်သောပစ္စည်းဥစ္စာ related တွေကိုမှသေးငယ် EEG P300 တုံ့ပြန်မှုစတင်ကြသူ high-အန္တရာယ်ဘာသာရပ်များ  ။ fMRI လေ့လာမှုများအတူတူပင်နိဂုံးချုပ် support: ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါမှာ-အန္တရာယ်ဘာသာရပ်များအမျိုးမျိုးသောအနိမ့်သည် non-မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှသေးငယ် striatal-limbic တုံ့ပြန်မှု, အနိမ့်ချက်ချင်း salience နှင့်အတူဖြစ်ကောင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အားပြ [110-112; cf, 55].
ရှေ့မှောက်တွင် vs။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်တွေကိုမရှိခြင်းလည်းလူသားတွေအတွက်တုံ့ပြန်ရန် dopamine ဆဲလ်များ၏စေတနာအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Non-မှီခိုလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ [(ကိုကင်းမှုန့်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်ဓာတ်များကို၏အကျွမ်းတဝင် microenvironment ကိုစွဲလန်းနှစ်သက်) မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုရှေ့မှောက်၌ကင်းမျိုချမိသည့်အခါ113] လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ သာ. ကြီးမြတ်သည့်တစ်သက်တာသမိုင်း, သာ. မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ နှိုင်းယှဉ်မှု၌, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများမရှိခြင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီး Non-မှီခိုလှုံ့ဆော်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပိုမိုတစ်သက်တာသမိုင်းနဲ့ [သေးငယ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်114] (ပုံ 1) ။ ဤအရလဒ်များကိုတစ်ခုမှာအနက်ကိုမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုမရှိခြင်း (dopamine ဆဲလ် reactivity ကို dampens သောကွောငျ့ဖွစျသညျပုံ 2).
မူးယစ်ဆေးတွေကိုရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း differential မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်သက်တာသမိုင်းတစ် function ကိုအဖြစ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ
စှဲအတွက် dopamine Active နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု၏မော်ဒယ်
အတူတူ, အထက်ပါလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမရှိခြင်းအတွက်အနိမ့် dopamine ဂီယာနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအ dopamine ဂီယာမူးယစ်ဆေးတွေကိုပစ္စုပ္ပန်အခါမြင်ကြတုံ့ပြန်မှုနှိုင်းယှဉ်ပါကအနိမ့်သောတစ်ဦး passive ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယ (conditional တားစီးထင်ဟပ်တစ်ခုတက်ကြွမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်ထောင့်ကွက် 2) ။ ထို့အပွငျအနိမ့် dopamine လှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကာလအတွင်းဧည့်ကြိုသည်ဤ Non-မူးယစ်ဆေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှမသာ, ဆွဲဆောင်မှုဟာသူတို့ရဲ့မရှိခြင်းမူးယစ်ဆေး-တွဲတွေကိုပုဆွဲနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုကိုလည်းအမှန်ပင်, မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ကောင်းစွာတူညီတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါလာသောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှာခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့အတွက်ကြီးထွားလွယ်ကူစွာထိခိုက်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းအပြုအမူများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်, ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြည်နယ်များထိုကဲ့သို့သောအစားအစာအဖြစ်သဘာဝကဆုလာဘ်တွေကို၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်နိုငျသကဲ့သို့  ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား [မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းလေ့လာတွေ့ရှိမူးယစ်ဆေးရှာကြံလည်းကြီးထွားမက်လုံးပေးမူးယစ်ဆေးတွေကို salience ထက်ဆုတ်ခွာ၏ရှောင်ရှားခြင်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြု117-119] ။ ထို့ကြောင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုသဘောထက်အပျက်သဘောအားဖြည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ဒြပ်စင်ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ဤအနည်းလမ်းတွေခုနှစ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူ unpaired တွေကို Sud နှစ်ခုကျယ်ပြအင်္ဂါရပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါဖြစ်နိုင်သည်: မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆည်းပူးနေနှင့်ရှင်သန်ရန်လိုအပ်သော non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောရည်မှန်းချက်များလိုက်ရှာအတွက်လျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားဆီသို့အကျိုးစီးပွားများ၏တိုးတက်သောကျဉ်း။
သင်တစ်ဦးမတ်စောက်သောတောင်ကုန်းကိုတက်လမ်းလျှောက်နေကြသည်ဆိုပါစို့။ အတိတ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြားယောင်းဆုလာဘ်ထိပ်မှာကြောင်းကိုသင်သည်ဆုံးမသွန်သင်ပြီဆိုရင်, ရှေ့ဆက်ရန်သင့်လှုံ့ဆျောမှုမြင့်မားတဲ့ဖြစ်မည်, အကျိုးကိုလာမည့်ကြောင်းကိုညွှန်ပြတွေကိုသင့်ရဲ့ drive ကိုတိုးပွားခြင်းနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များနီးကပ်စွာ dopamine ဂီယာပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်; ဆိုလိုသည်မှာ ဆုလာဘ်-တွဲအခင်းအကျင်း discrete ဆုလာဘ်-တွဲတွေကိုတုန့်ပြန်မှာမီးဖြတ်ဖို့ dopamine ဆဲလ်များ၏စေတနာတိုးပွားစေ [44,98,115] ။ နှိုင်းယှဉ်မှုမှာတော့အတိအလင်းဆုလာဘ်များမရှိခြင်းနှင့်အတူတွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့အေးစက် inhibitor ၏ဂုဏ်သတ္တိများဆည်းပူးနိုငျ  နှင့်တက်ကြွစွာ dopamine စေတနာနှင့်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-related တွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းတားစီးဖို့စွမ်းရည် [76,104] ။ အတူတူ, အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ဤပေါင်းစပ်ကွာ Non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များထဲကနေတစ်ဦးချင်းစီပဲ့ကိုင်, မူးယစ်ဆေး-တွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်တွေကိုအဘို့ခိုင်ခံ့ဦးစားပေးထုတ်လုပ်သည်။
နှစ်ဦးကအလွန်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (ကျင်းပေါင်းအဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာဘာသာရပ်များသည်ဤဆိုးကျိုးများမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုပုံ 3) ။ သူတို့လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးသောအခါအနိမ့်စွန့်စားသည်အသုံးပြုသူများ, (အရက်ဟာအဖျော်ယမကာင့်ရှေ့မှာ, အနံ့, အရသာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူမျိုချမိပါ) ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကပထမဦးဆုံးတစ်ဦးထူးခြားတဲ့မြင့်မားသော dopamine တုံ့ပြန်မှု [စှဲအဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာထကြွလွယ်သောပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများတွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်120] ။ သူတို့လက်ရှိမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို (မပါဘဲစမ်းသပ်ပြီးသောအခါဒုတိယအနှင့်ဆနျ့ကငျြဘသပိတ်မှောက်အတွက်အတော်လေးအနိမ့် dopamine လွှတ်ပေးရန်စှဲအဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာထကြွလွယ်သောပစ္စည်းဥစ္စာသည်အသုံးပြုသူများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်dnondescript gelcaps ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသော -amphetamine တက်ဘလက်များ)  ။ ဒီလေ့လာမှုတွေနှစ်ခုစလုံးမှာတော့အုပ်စုကွဲပြားမှုတစ်သက်တာပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုရန်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤ High-အန္တရာယ်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမရှိခြင်းအတွက် dopamine တုံ့ပြန်မှု [ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသမိုင်းနဲ့အဘို့အလိုက်ဖက်အနိမ့်အန္တရာယ်ဘာသာရပ်များတွင်တွေ့မြင်များထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြ114] ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်သည်ဤ High-အန္တရာယ်လူဦးရေအတွက်ဆုလာဘ်ပေးရန်တုံ့ပြန်မှုအပေါ်အေးစက်ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုမြန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကျယ်ပြန့်သည်, သောဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ အတူတူဒီမှာပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် sensitive ကအေးစက်, ဤဆိုးကျိုးများမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏ပေါင်းစပ်တဲ့ Sud များအတွက်ဇာတ်စင် setting, တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆီသို့မှာ-အန္တရာယ်လူငယ်ခုတ်မောင်းဖို့လာနိုင်တယ်လို့အကြံပြုပါတယ်။
Dopamine နှင့်မြင့်မား external တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
hyper- သို့မဟုတ် hypo-mesolimbic ဖြစ်စေ dopamine Active အာရုံစိုက်ကြောင်းစွဲလမ်း၏တစ်ခုတည်းသောအချက်အမြင်များမတူဘဲ, ဒီမှာအဆိုပြုထားသမာဓိမော်ဒယ်, အရှင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအပါအဝင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟာဗျူဟာများ, (များအတွက်ဝတ္ထု neurobiological Starting Point သို့ပေး, နှစ်ဦးစလုံး features တွေပေါင်းစပ်ထောင့်ကွက် 3) ။ မကြာသေးမှီကအလုပ်အကောင်းမြင်ဘို့အကြောင်းပြချက်ပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြီးကောင်ပေါက် externalizing [နှစ်နှစ်နောက်ဆက်တွဲမှာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လေ့ကျင့်ရေးပြပွဲနည်းပါးလာပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းပြဿနာများပေးထား129].
ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှထကြွလွယ်သောအပြုအမူ, မြင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် သာ. ကြီးမြတ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ကြားရှိစပ်လျဉ်းသားစဉ်မြေးဆက်ကိုဖြတ်ပြီးပြန့်ပွားနိုင်ပါ။ heritable စရိုက်များကနေတဆင့်ဝါဒဖြန့်အပြင်, ထကြွလွယ်သောကြွက် [လျော့နည်းမိခင်စောင့်ရှောက်မှုပြ121] သာ. ကြီးမြတ် Impulse မှဦးဆောင်သူတို့၏သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် cue sensitivity ကို, dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆုချ [122-124] ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ဤတိရိစ္ဆာန်များလည်းဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များနှင့်အဆက်အသွယ်ထံသို့ ပို. ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဖိအားလည်း [dopamine လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အမူအကျင့်များနှင့် dopaminergic ရေရှည်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်125-127] နောက်ထပ် pre-ရှိပြီးသားသဘောထားတွေ aggravating ။ တူညီသောသက်ရောက်မှုလည်းလူသားတွေအတွက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ် externalizing အပြုအမူတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမိသားစုများအတွက်တက်ကြီးထွားလာကလေးများကျင်းပေါင်းအဘို့အပင်မြင့်မားအန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုချပြီး, စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်လျစ်လျူရှုများအတွက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာ .
ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့စွဲလမ်းတီထွင်ထားပြီးတခါ (hyper- နှင့် hypo-dopamine function ကိုပြောင်း externalizing စရိုက်များ,) အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလုပ်ငန်းစဉ်များသက်ဆိုင်ရာရှိမရှိမှန်းဆနေဆဲဖြစ်သည်။ တဖကျတှငျမူမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုတသမတ်တည်းလက်ရှိစှဲနှင့်အတူလူအတွက် striatal Active သွေးဆောင်အဲဒီ Activity ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုတွင်တွေ့မြင်တွေထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မူးယစ်ဆေး cue-သွေးဆောင် dopamine တုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအားအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု [တဏှာနှင့်အတူပတျသကျ76] ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကကုသမှုများအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်မြင့်မားသော dopamine ဂီယာငြင်းပယ်ဖို့အချိန်မတန်မီကြောင်းတင်ပြသည်။
စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူစိန်ခေါ်အခါတစ်ချိန်တည်းမှာပင်လက်ရှိကျင်းပေါင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းတသမတ်တည်း [ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်, striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွားရှိသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်61] ။ အမှတ်နှစ်ခုကဒီမှာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ကြသည်။ [ဒီလေ့လာမှုတွေထဲကတစ်ခုပေမယ့်အားလုံးအတွက်ပထမဦးဆုံး130] စိတ်ကြွဆေး (ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုမရှိဘဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်ထောင့်ကွက် 4) ။ မူးယစ်ဆေး-တွဲတွေကိုမရှိခြင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယ, လက်ရှိကျင်းပေါင်းပြပွဲနှင့်အတူမအားလုံးတစ်ဦးချင်းစီစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့။ ဤသည် differential ကိုတုန့်ပြန်လက်တွေ့အရေးပါမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာတဲ့: ဤအခြေအနေများအောက်တွင်ပုံမှန် dopamine တုံ့ပြန်မှုပြတဲ့သူဘာသာရပ်များ၏အကြမ်းဖျင်း 50% လူနာတစ်ဦး dopamine တုံ့ပြန်မှုဖျောပွနိုငျသောသူသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေပြုစုပျိုးထောင်လည်းငွေကြေးအားဖြည့်-based အပြုအမူကုထုံးမှပိုကောင်းနများမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်တွေကိုမရှိခြင်းလည်းပိုကောင်းအသစ်သောဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူကိုသင်ယူနိုင်ကြသည် [138-139] ။ ဒါဟာအခြားပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုလူနာတွင်တွေ့မြင်နိမ့် dopamine လွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမရှိခြင်း, ကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု neurotoxic သက်ရောက်မှုမှ differential ကိုအားနည်းချက်, တစ်ဦး Pre-တည်ဆဲရို, dopamine D2 အကျူးနဲ့ post-Synaptic အဲဒီ receptor စူပါထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်နေဆဲ -sensitivity, သို့မဟုတ်ဤအချက်များအချို့ကိုပေါင်းစပ်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလ, Martinez နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ  intriguingly [ဤသူတို့သည်တစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ထိုကဲ့သို့သော L-DOPA အဖြစ် presynaptic dopamine function ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းအေးဂျင့်များနှင့်အတူ Pre-ကုသခံခဲ့ရသည်လျှင်သူတို့အမူအကျင့်ကုထုံးကနေပိုကောင်းတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြနေတဲ့ biomarker ဖော်ပြရန်အံ့သောငှါမှတ်ချက်ပြု140].
Dopamine နှင့် "အမူအကျင့်စွဲလမ်း"
စွဲ related တွေကိုရှေ့မှောက်၌တိုးပွား dopamine တုံ့ပြန်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများ '' အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကို '' နှင့်အတူလူအတွက်တသမတ်တည်းမြင်ကြပြီ။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ non-ပစ္စည်းဥစ္စာ related '' အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကို '' နှင့်အတူလူ (ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, Bing စား Disorder) [အစားအစာ, ငွေကြေးဆုလာဘ်များနှင့် undisguised စိတ်ကြွဆေးတက်ဘလက်မှပုံကြီးချဲ့ striatal dopamine တုံ့ပြန်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများပြ131-134; cf, 135] ။ အဆိုပါထုတ်ယူ dopamine လွှတ်ပေးရန်, ပိုမိုပြင်းထန်သည့်လက်တွေ့ပြဿနာများ [ သာ.132,134,136-137] ။ အနိမျ့ dopamine လွှတ်ပေးရန်, ဤလူဦးရေအတွက်အစီရင်ခံထားမထားပါဘူး။ သို့သော် fMRI ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းစာပေနှစ်ခုလုံးကိုတိုးမြှင်သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် striatal လှုပ်ရှားမှုများတွင်လျော့ကျ, ဤ differential ကိုတုံ့ပြန်မှုသိသိသာသာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထဲတွင်ရှိနေခြင်းကိုထင်ဟပ်ဖို့ပေါ်လာ vs။ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလောင်းကစားဝိုင်း related တွေကိုမရှိခြင်း .
အခြားအ dopamine အခြေစိုက်ကုသမှုမဟာဗျူဟာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအောက်မှာလည်းဖြစ်ကြသည်။ [Dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ligands အနည်းငယ်သာထိရောက်မှုကိုပြသကြပေမယ့် D3 အဲဒီ receptor ရန်အစမ်းသဘောစတင်အလားအလာပြခဲ့ကြ141] ။ အခြားအ receptor Subtype (D4, D5) ဆန်းစစ်ခံရဖို့သေးရှိသည်။ စွဲဟာတွေကိုပျက်ကွက်အခါမူးယစ်ဆေးတွေကိုနှင့် dips တုံ့ပြန် dopamine spikes တွေ့ကြုံခံစားဖို့ပေါ်လာကတည်းကနောက်ဆုံးအနေနဲ့, dopamine modulator တွေကိုပစ္စုပ္ပန်မော်ဒယ်နှင့်ကိုက်ညီမယ့်ဝတ္ထုကုသမှုပေးနိုငျသညျ။ အဆိုပါအဆိုပြု [ဤသူတို့သည်ဒြပ်ပေါင်းများအားလုံး dopamine ဂီယာ negating နှင့်အကျိုးစီးပွားတစ်ဦးနေရာအနှံ့အရှုံးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲမူးယစ်ဆေးရှာကြံပြန်လည်ကြောင့် dopamine အတွက်တိုးလျော့ကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်142].
ပစ္စုပ္ပန်မော်ဒယ်ရှေ့မှောက်တွင်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူတစ် neurodevelopmental ရှုထောင့်ပေါင်းစပ် vs။ မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုမရှိခြင်းစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များ directing နှင့်တဖြည်းဖြည်းပိုပြီးမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်တစ်ဦး Sud များအတွက်ဇာတ်စင် setting, dopamine reactivity ကိုထိန်းညှိဖို့လာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ဘက်ပေါင်းစုံရှုထောင့်အစောပိုင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာလမ်းညွှန်များအတွက်ဂတိတော်ကိုပြသထားတယ်နှင့်ဝတ္ထု pharmacotherapeutic ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအသီးအနှံများဦးတည်ချက်သည် non-မူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်စိတ်ဝင်စားမှုရေရှည်တည်တံ့ဖို့စွမ်းရည်များကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြောင်းဒြပ်ပေါင်းများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤရည်မှန်းချက်များ၏အယူခံဝင်အာူးကျင်းပေါင်းနှင့်အတူသူတို့အားကွာမူးယစ်ဆေးနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုထံမှခုတ်မောင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာစွာနေထိုင်ဘို့လိုအပ်သောမြားပိုကောင်းတက်ရောက်ရန်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
စွဲလေ့ကလေးဘဝအတွက်ပြဿနာအပြုအမူတွေအားဖြင့် presaged နေကြတယ်
ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ရပ်များအဓိကတိုးမြှင် dopamine တုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ,
မူးယစ်ဆေးဝါးမူးယစ်ဆေးဝါးများဆီသို့ဦးစားအပြုအမူ directing, dopamine တုံ့ပြန်မှု hijack
non-မူးယစ်ဆေးဖြစ်ရပ်များလျော့နည်းအဓိကနှင့် dopamine သက်ဝင်စေဖို့လျော့နည်းနိုင်ပါဖြစ်လာ
ကျဉ်းအကျိုးစီးပွားမကြာခဏမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအဘို့စင်မြင့် setting, ဖွံ့ဖြိုး
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုကနျြးမာရေးသုတေသန (ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်-36429 နှင့်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်-64426, ML) နှင့်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute (DA09397, PV) အတွက်ကနေဒါ Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
1 ။ Susbtance အလွဲသုံးစားမှု WHO ကစီမံခန့်ခွဲမှု: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး။ 2013 http://www.who.int/substance_abuse/facts/global_burden/en/
2. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အရက်အလွဲသုံးစားမှုများ၏စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်၏ခန့်မှန်းချက်အသစ်ပြောင်းခြင်း Harwood အိပ်ချ်: ခန့်မှန်း, update ကိုများနှင့်ဒေတာများ။ ကနျြးမာရေးနှင့်လူ့န်ဆောင်မှုများ၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာန, အမေရိကန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု, ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, အရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အမျိုးသားအင်စတီကျု, Rockville, MD: 2000 ။ အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒရုံး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်, 1992-1998 ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အလုပ်အမှုဆောင်ရုံး; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 2001 ။
3 ။ အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုတရားမျှတရေးအဆိုပါစီးပွားရေးဇုန်သက်ရောက်မှု၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန။ မှရယူရန် 2011 http://www.justice.gov/ndic.
4 ။ et al Piazza PV ။ Dopaminergic လှုပ်ရှားမှုဟာ prefrontal cortex အတွက်လျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ predisposed ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးလာသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 567: 169-174 ။ [PubMed]
5 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 52-58 ။ [PubMed]
6 ။ et al Blum K သည်။ "ကဲ့သို့" နှင့်ချို့တဲ့ရောဂါ (RDS) ဆုချဆက်စပ် "လို": ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် circuitry အတွက် hypothesizing differential ကို Response ။ Curr ။ ဆေးဝါး။ des ။ 2012; 18: 113-118 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ ခ Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008; 363: 3137-3146 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
8 ။ midbrain dopamine အာရုံခံဆဲလျ reactivity ကိုနှင့် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေး Vezina P. အသိ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ, 2004; 27: 827-839 ။ [PubMed]
9 ။ et al Conrod PJ ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအန္တရာယ်အချက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာအမျိုးသမီးပစ္စည်းဥစ္စာအချိုးဖောက်ဆုံးခွဲခြားတဲ့စနစ်၏ validation ။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2000; 14: 243-256 ။ [PubMed]
10 ။ Tarter RE, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Neurobehavioral disinhibition ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါစတင်ခြင်းမှာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1078-1085 ။ [PubMed]
11 ။ et al Kendler KS ။ အမျိုးသားရေးဆွီဒင်မွေးစားလေ့လာမှု: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်အန္တရာယ်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်မိသားစုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 69: 690-697 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ et al Kendler KS ။ မိဘအုပ်ထိန်းသူအရက်အသုံးပြုမှု / ပြဿနာများနှင့်နွှယ်စိတ်ထား၏ရှုထောင့်, ပြင်ပအပြုအမူများနှင့်အရက်အသုံးပြုမှု / ပြဿနာများ။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2013 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ et al Moffitt TE ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ဦးက gradient ကိုကျန်းမာရေး, စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ PNAS ယူအက်စ်အေ။ 2011; 108: 2693-2698 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ et al Hicks BM ။ မွေးစားခြင်းနှင့်အမွှာနွှယ်အတွက် Disorders Externalizing ၏မိသားစုဂီယာအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သွဇာ။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013a; 70: 1076-1083 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ et al Hicks BM ။ လူမှုရေးနှင့်ရဲရင့်: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက် premorbid အန္တရာယ်အခြေခံကြောင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝဝိသေသလက္ခဏာများဖော်ထုတ်ခြင်း။ dev ။ Psychopathology ။ 2013b; 26: 1-17 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ et al Pingault JB ။ inattention, hyperactivity နှင့်အတိုက်အခံအပြုအမူများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု / မှီခို၏ခန့်မှန်းချက်၏ငယ်ဘဝဘယ်နေရာတွေမှာလဲ: တစ် 15 နှစ် longitudinal လူဦးရေ-based လေ့လာမှု။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 18: 806-812 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ et al ဒစ်ခ် DM ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အရက်အသုံးပြုမှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ရွယ်တူမှတဆင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေနှင့်အတူ, အသက်5မတိုင်မီကလေးဘဝစိတ်ထားအချက်များအားဖြင့်ခန့်မှန်းထားသည်။ Alc: Clin ။ Exp ။ res ။ 2013; 37: 2108-2117 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
18 ။ Leyton အမ်စှဲရောဂါများသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသလား ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience ။ 2013; 38: 219-221 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19 ။ Rutter အမ် Developmental psychopathology: တစ်ပါရာဒိုင်းပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ရုံ relabeling? dev Psychopathology ။ 2013; 25: 1201-1213 ။ [PubMed]
20 ။ Newman က JP, Lorenz AR ။ တုန့်ပြန်မော်ဂျူနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့: psychopathy နှင့်အခြား dysregulatory psychopathology များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Davidson RJ, Scherer K ကိုရွှေပန်းထိမ်နာရီ, အယ်ဒီတာများ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသိပ္ပံ၏လက်စွဲစာအုပ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; အောက်စဖို့ဒ: 2002 ။ စစ။ 1043-1067 ။
21 ။ Mahler SV, က de ကျေးအိပ်ချ် Cue-ဓာတ်ပေါင်းဖို: အစားအစာသို့မဟုတ်ဆေးလိပ်သောက်နေကြပြီး cue-သွေးဆောင်တဏှာအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု။ PLoS ONE ။ 2010; 5: e15475 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22 ။ et al Bohbot VD ။ Caudate နျူကလိယ-မှီခိုသွားလာမှုမဟာဗျူဟာများစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးတိုးမြှင့်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။ Hippocampus ။ 2013; 23: 973-984 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ ယာဉ်ကြော SD, Cherek DR ။ maladaptive အပြုအမူသမိုင်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များကယူပြီးအန္တရာယ်။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2001; 9: 74-82 ။ [PubMed]
24 ။ Séguin JR, et al ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏တည်ငြိမ်နှင့်မတည်မငြိမ်သမိုင်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက်တုန့်ပြန်ဇွဲ: နောက်ခံဖြစ်စဉ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေကလေး။ Psychol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 43: 481-494 ။ [PubMed]
25 ။ Fairchild G. အမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ psychopathology ။ dev ။ Cog ။ neuroscience ။ 2011; 1: 414-429 ။ [PubMed]
26 ။ et al Piazza PV ။ စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးချင်းစီအားနည်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြောင်းအချက်များ။ သိပ္ပံ။ 1989; 245: 1511-1513 ။ [PubMed]
27 ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိတ်ကြွဆေးမှ Pierre ၏ PJ, Vezina P. ဓာတ်: အသစ်အဆန်းများနှင့်မူးယစ်ရန်ကြိုတင်ထိတွေ့မှုမှတုန့်ပြန်၏ပံ့ပိုးမှုများ။ Psychopharmacology ။ 1997; 129: 277-284 ။ [PubMed]
28 ။ et al Suto N ကို။ အသစ်အဆန်းမှ Locomotor တုံ့ပြန်မှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနီကိုတင်းဖို့ကြွက်ရဲ့ propensity ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 2001; 158: 175-180 ။ [PubMed]
29 ။ Marinelli အမ်တဲ့ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်ဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုများ၏အများအပြားရှုထောငျ့: မစ်ချယ်, ဟမ်နှင့်မာကု (2005) ပြုမူနေအပေါ်သီအိုရီမှတ်ချက်။ neuroscience ။ 2005; 1194: 1144-1151 ။ [PubMed]
30 ။ et al Deroche-Gamonet V ကို။ ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1014-1017 ။ [PubMed]
31 ။ Vanderschuren LJMJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
32 ။ ဘီးလင်း D ကို, ကိုကင်းစွဲဖို့အသစ်အဆန်းများနှင့်အားနည်းချက်မှ Deroche-Gamonet V. တုံ့ပြန်ချက်: multi-လက်ခဏာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အလှူငွေ။ အေးနွေ Harb ။ ရှုထောင့်။ Med ။ 2012; 2: a011940 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
33 ။ ချိတ်က MS, et al ။ အထပ်ထပ် intracranial စိတ်ကြွဆေးတာဟာအောက်ပါအသိနှင့် IP စိတ်ကြွဆေး, ကင်း, ဒါမှမဟုတ်ဖိန်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1992; 654: 444-447 ။ [PubMed]
34 ။ ထားလိုက်တော့ TL, Crawley ဖြစ်မှု။ သကြားစားသုံးမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနျူကလိယ accumbens အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လျတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1996; 303: 177-181 ။ [PubMed]
35 ။ et al Flagel SB ။ လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက် dopamine များအတွက်တစ်ဦးကရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 2011; 469: 53-59 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ ထားလိုက်တော့ TL, Vaccarino FJ ။ သကြားစားသုံးမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Psychopharmacology ။ 1994; 116: 1-8 ။ [PubMed]
37 ။ Zocchi တစ်ဦးက, et al ။ နျူကလီးယပ်အတွက် locomotor လှုပ်ရှားမှုနဲ့ dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏စင်ပြိုင် strain-မှီခိုအကျိုးသက်ရောက်မှု accumbens: ကြွက်များတွင်တစ်ဦးအတွက် Vivo လေ့လာမှု။ neuroscience ။ 1998; 82: 521-528 ။ [PubMed]
38 ။ Marinelli M က, အဖြူရောင် FJ ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှ Enhanced အားနည်းချက် midbrain dopamine အာရုံခံ၏မြင့်မားသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2000; 20: 8876-8885 ။ [PubMed]
39 ။ တေလာ JR, Horger BA ဘွဲ့။ Enhanced အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens စိတ်ကြွဆေးများက conditional အကျိုးသည်တုံ့ပြန်ကင်းာင်းပြီးနောက် potentiated ဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology ။ 1999; 142: 31-40 ။ [PubMed]
40 ။ et al Schweimer J ကို။ ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ကြွက် anterior cingulate အတွက် catecholamines neurotransmission ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005; 119: 1687-1692 ။ [PubMed]
41 ။ et al Salamone JD ။ Dopamine, အမူအကျင့်ဘောဂဗေဒနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်နယ်စပ်ဒေသ။ 2009; 3: 1-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 ။ et al Winstanley, CA ။ ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုအတွက် basolateral amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍနှိုငျးယှဉျ။ ဂျေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004; 24: 4718-4722 ။ [PubMed]
43 ။ Floresco SB, Ghods-Sharifi အက်စ် Amygdala-prefrontal cortical circuitry အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချထိန်းညှိ။ Cereb ။ cortex ။ 2007; 17: 251-260 ။ [PubMed]
44 ။ et al Howe မဂ္ဂါဝပ်။ striatum အတွက်အချက်ပြကြာရှည် dopamine ဝေးကွာသောဆုလာဘ်၏နီးကပ်နှင့်တန်ဖိုးအချက်ပြလိုက်ခြင်း။ သဘာဝ။ 2013; 500: 575-579 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
45 ။ et al ဗန် Gaalen MM ။ အမူအကျင့် disinhibition dopamine အဲဒီ receptor activation လိုအပ်သည်။ Psychopharmacology ။ 2006; 187: 73-85 ။ [PubMed]
46 ။ et al Pattij T က။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု inhibitory တုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 587-598 ။ [PubMed]
47 ။ et al Winstanley, CA ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏ Dopaminergic မော်ဂျူအာရုံစူးစိုက်မှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်ဖျော်ဖြေကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်ထကြွလွယ်သောသက်ရောက်သည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2010; 210: 263-272 ။ [PubMed]
48. Leyton M. အလိုဆန္ဒ၏ neurobiology: dopamine နှင့်လူတို့၏စိတ်အခြေအနေနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ။ ML Kringelbach & KC Berridge (Eds ။ ) တွင်၊ ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်မှုများတွင်။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်စာနယ်ဇင်း, Ch ။ 2009; 13
49 ။ Leyton M က, et al ။ ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦးပေ / [11C] raclopride လေ့လာမှု: extracellular dopamine, မူးယစ်ဆေးလိုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာအတွင်းဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်တိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 1027-1035 ။ [PubMed]
50 ။ et al Buckholtz JW ။ လူ့ Impulse အတွက် Dopaminergic ကွန်ယက်ကိုကွဲပြားခြားနားမှု။ သိပ္ပံ။ 2010a; 329: 532 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
51 ။ et al Buckholtz JW ။ စိတ်စရိုက်များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Mesolimbic dopamine ဆုလာဘ် system ကို hypersensitivity ။ နတ်။ neuroscience ။ 2010b; 13: 419-421 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
52 ။ et al Cherkasova သင်္ဘော MV ။ ADHD နှင့်အတူကုသမှု-ရင်တော့မှားမယ်လူကြီးများအတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ်ပေ / [11C] raclopride လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2013 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏]
53 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, et al ။ စွန့်စားမှု-ဆည်းပူးနေနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဦးနှောက်: အန္တရာယ်မှာဘယျသူနညျး dev ။ သိပ္ပံ။ 2007; 10: F8-F14 ။ [PubMed]
54 ။ et al Bjork JM ။ မက်လုံးပေး-ရူးနှမ်း mesolimbic activation နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် symptomatology externalizing ။ ဂျေကလေးစိတ်ပညာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 51: 827-837 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
55 ။ et al Bjork JM ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့မက်လုံးပေး neurocircuitry ၏စုဆောင်းမှု: ကျန်းမာရေးဆယ်ကျော်သက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုရှာဖွေစူးစမ်း။ dev ။ Cog ။ neuroscience ။ 2011; 1: 570-577 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56 ။ et al ဝူ CC ကို။ အကျိုးသက်ရောက်စေစရိုက်များမက်လုံးပေးမျှော်လင့်၏ relaible အမှတ်အသားများလင့်ထားသည်။ NeuroImage ။ 2014; 84: 279-289 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57 ။ Chumbley JR, et al ။ fatal ဆွဲဆောင်မှု: ventral striatum လူသားတွေအတွက်အကုန်အကျရွေးချယ်မှုအမှားများကိုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ NeuroImage ။ 2013 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PubMed]
58 ။ et al ဒီမိုများ Ke ။ အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှနျူကလိယ accumbens လှုပ်ရှားမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဂျေ neuroscience ။ 2012; 32: 5549-5552 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59 ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ stimulant မှ Leyton အမ်အခြေအနေများနှင့်ထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 31: 1601-1613 ။ [PubMed]
60 ။ Dagher တစ်ဦးက, Robbins TW ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, စွဲလမ်း, dopamine: ပါကင်ဆန်ရောဂါကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2009; 61: 502-510 ။ [PubMed]
61 ။ Trifilieff P ကို, Martinez ဃ Imaging ကစွဲ: Impulse များအတွက် biomarkers အဖြစ် striatum အတွက်အချက်ပြ D2 receptors နှင့် dopamine ။ Neuropharmacology ။ 2013 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ et al Nagano-Saito တစ်ဦး။ Dopamine ဟာ Set-ပြောင်းလဲတာဝန်စဉ်အတွင်းနံရံပစ်ကစားနည်း-striatal functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2008; 28: 3697-3706 ။ [PubMed]
63 ။ et al Nagano-Saito တစ်ဦး။ မျှော်လင့်ခြင်းမှအရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှ, သိမှုဆိုင်ရာအာရုံဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို: တစ်ခု fMRI-tyrosine လျော့ကျလေ့လာမှု။ ဂျေ Neurophysiol ။ 2012; 108: 501-512 ။ [PubMed]
64 ။ et al Bjork JM ။ လူ့စိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့၏အမူအကျင့်များနှင့်ဦးနှောက်လက်မှတ်ပေါင်းအပေါ်အစားအသောက် tyrosine / phenylalanine လျော့ကျဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2013 Doi: 10.1038 / npp.2013.232 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ et al ဖရန့် MJ ။ မုန္လာဥနီ by သို့မဟုတ်ချောင်းကို by: သိမြင်မှုအားဖြည့် Parkinson အတွက်သင်ယူမှု။ သိပ္ပံ။ 2004; 306: 1940-1943 ။ [PubMed]
66 ။ Leyton M က, et al ။ ကိုကင်းတဏှာ Euphoria ပီတိနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေး: catecholamines ရှေ့ပြေးကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများတစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှု။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2005; 119: 1619-1627 ။ [PubMed]
67 ။ Leyton M က, et al ။ D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်မက်လုံး salience ၏ခံစားချက်-မြှသက်ရောက်မှု: စူးရှ dopamine ရှေ့ပြေးတွေပျက်စီးမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု neuroscience ။ 2007; 32: 129-136 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68 ။ et al Barrett SP ။ တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: လူသားတွေအတွက်အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 18: 439-447 ။ [PubMed]
69 ။ et al Venugopalan VV ။ acute phenylalanine / tyrosine လျော့ကျစွဲ၏အဆင့်ဆင့်ဖြတ်ပြီးစီးကရက်ဆေးလိပ်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုလျော့နည်းစေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 2469-2476 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 Cawley EI, et al ။ Dopamine and light - စိတ်ဓာတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအပေါ်ခွဲခြားထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများခွဲစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရာသီအလိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသောရောဂါရှိသည့်အမျိုးသမီးများ။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု & အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2013; 38: 388-397 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
71 ။ Simioni AC အ, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် Impulse အပေါ်ရောဂါနှင့်ကုသမှု၏သက်ရောက်မှုချက်ကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ။ ဂျေ Int ။ Neuropsychol ။ Soc ။ 2012; 18: 942-951 ။ [PubMed]
72 ။ ထင်းရှူးတစ်ဦးက, et al ။ Dopamine, အချိန်နှင့်လူသားတွေအတွက် Impulse ။ ဂျေ neuroscience ။ 2010; 30: 8888-8896 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
73 ။ et al Regier DA ။ အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း၏ Comorbidity ။ အဆိုပါ epidemiological ရေဝေရေလဲဧရိယာ (ECA) လေ့လာမှုကနေရလာဒ်။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1990; 264: 2511-2518 ။ [PubMed]
74 ။ et al Boileau ငါ။ လူသားများတွင်စိတ်ကြွဆေးမှ modeling ာင်း: ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး [11C] raclopride / ပေလေ့လာမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 63: 1386-1395 ။ [PubMed]
75 ။ et al O'Daly ဩဃ။ ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် schizophrenia များ၏စိတ်ကြွဆေးာင်းမော်ဒယ်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 68: 545-554 ။ [PubMed]
76 ။ Leyton M က, Vezina P. Striatal အတက်အကျ: လူသားတွေအတွက်စှဲဖို့အားနည်းချက်အတွက်သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2013; 37: 1999-2014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77 ။ Stewart က J ကို, Eikelboom R. မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများအေးစက်။ ခုနှစ်တွင်: Iversen ll, Iversen SD, Snyder SH, အယ်ဒီတာများ။ Psychopharmacology ၏လက်စွဲစာအုပ်။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1987 ။ စစ။ 1-57 ။
78 ။ et al Aragona BJ ။ ကြွက်များတွင် cue-ကင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း phasic dopamine ဂီယာပုံစံများ၏ Real-time ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2009; 30: 1889-1899 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79 ။ et al di Ciano P ကို။ D-စိတ်ကြွဆေး၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်ထမ်းပိုး-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ဓာတ်တိုးရေစီးကြောင်းထဲမှာအေးစက်အပြောင်းအလဲများကို။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 1998; 10: 1121-1127 ။ [PubMed]
80 ။ Ito က R ကို, et al ။ နျူကလီးယပ်အခြေအနေများ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Dissociation ကိုကင်းတွေကိုတုန့်ပြန်နှင့်ကြွက်များအတွင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း core နဲ့ shell ကို accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 2000; 20: 7489-7495 ။ [PubMed]
81 ။ et al Weiss က F ။ ကြွက်များတွင်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများထိန်းချုပ်ရေး: ငွိမျးအော်ပရေတာ-တုံ့ပြန်နှင့် amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်၏ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 2000; 97: 4321-4326 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
82 ။ et al ရော်ဘင်ဆင် TE ။ တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု: ဆုလာဘ်တွေကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများတွင်။ Neuropharmacology ။ 2014; 76: 450-459 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
83 ။ et al Flagel SB ။ စွဲလမ်းများအတွက်ဂယက်: တွေကို-related ဆုချဖို့အမူအကျင့် disinhibition နှင့်တုန့်ပြန်မှမျိုးဗီဇအားနည်းချက်တစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2010; 35: 388-400 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
84 ။ et al Panlilio LV ။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်လူ့ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်၎င်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 433-443 ။ [PubMed]
85 ။ ကလေးကအီးလူသားများအတွက်က de ကျေးအိပ်ချ်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကို။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 900-904 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86 ။ et al Mayo အဘိဓါန် LM ။ လူသားများတွင်တစ်ဦးစိတ်ကြွဆေး-ဆက်စပ် Contextual cue မှ preference ကိုအေးစက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 921-929 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
87 ။ ကလေးကအီး, က de ကျေးအိပ်ချ် Contextual အေးစက်လူသားတွေအတွက် D-စိတ်ကြွဆေး၏ psychostimulant နှင့်မက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများပိုကောင်းစေပါတယ်။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2013; 18: 985-992 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
88 ။ et al Boileau ငါ။ လူသားတွေအတွက်အေးစက် dopamine လွှတ်ပေးရန်: စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူတစ်ပေ [11C] raclopride လေ့လာမှု။ ဂျေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007; 27: 3998-4003 ။ [PubMed]
89 ။ et al တန် DW ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI လေ့လာမှုများတစ် Meta-analysis သည်: အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးတွေကိုဆင်တူဦးနှောက်ဒေသများကိုသက်ဝင်။ ဇီဝကမ္မဗေဒအပြုအမူ။ 2012; 106: 317-324 ။ [PubMed]
90 ။ et al Bartholow bd ။ အရက် sensitivity ကိုအတွက်အနိမ့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက်တွေကိုမှ P3 ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ reactivity ကို၏သတ်မှတ်ချက်။ psyche ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူ။ 2010; 24: 220-228 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
91 ။ et al Kareken DA ။ ပဏာမတွေ့ရှိချက်: အရက်-related olfactory တွေကိုနျူကလီးယပ် accumbens နှင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုသောက်အတွက် ventral tegmental ဧရိယာကိုသက်ဝင်။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2004; 28: 550-557 ။ [PubMed]
92 ။ et al Kareken DA ။ အရက်၏မိသားစုသမိုင်းမှာ-အန္တရာယ်သောက်ထဲမှာအရက်သောက်စရာအနံ့နှင့်အရက်ဖို့တိုကျရိုကျတုံ့ပြန်မှု mediates ။ NeuroImage ။ 2010; 50: 267-276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
93 ။ Dager အေဒီ, et al ။ ကောလိပ်ကျောင်းသောက်များတွင်အရက်သေစာတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်အရက်၏မိသားစုသမိုင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2013; 37 (ပျော့ပျောင်း 1): E161-171 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
94 ။ et al Claus ED ။ အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ် neurobiological phenotypes ဖော်ထုတ်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 2086-2096 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
95 ။ et al Filbey FM ရေ။ အရက်၏အရသာကိုထိတွေ့သည့် mesocorticolimbic neurocircuitry ၏ activation elicits ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 1391-1401 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
96 ။ Oberlin BG, et al ။ အရက်၏မိသားစုသမိုင်းများကကြားဝင်ဖြန်ဖြေ: ဘီယာအရသာအထီးသောက်အတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြောခြင်းငှါ။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 1617-1624 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
97 ။ ဟော်လန် PC ကို။ Pavlovian အေးစက်အတွက် setting အခါသမယ။ ခုနှစ်တွင်: Medin DL, အယ်ဒီတာ။ သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ပညာ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; San Diego မှ,, CA: 1992 ။ စစ။ 69-125 ။
98 ။ et al ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ TiNS ။ 2007; 30: 220-227 ။ [PubMed]
99 ။ Vezina P ကို, Leyton အမ်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင်တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးအေးစက်။ Neuropharmacology ။ 2009; 56 (ပျော့ပျောင်း 1): 160-168 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100 ။ Mitchell က JB ယခင်ကမော်ဖင်းအကိုက်စနစ်တကျထိုးနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေခြင်းအတွက်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ Stewart ကဂျေနည်းပြ။ PBB ။ 1990; 35: 367-372 ။ [PubMed]
101 ။ et al Duvauchelle CL ။ အမူအကျင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းတိုးအေးစက်နှင့်သွေးကြောသွင်းကင်းထုတ်လုပ် dopamine အဆင့်ဆင့် accumbens ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2000; 114: 1156-1166 ။ [PubMed]
102 ။ Stewart က J ကို, Vezina P. အခြေအနေများနှင့်အမူအကျင့်ာင်း။ ခုနှစ်တွင်: Kalivas PW, Barnes CD ကို, အယ်ဒီတာများ။ အာရုံကြောစနစ်အတွက်အသိ။ Telford စာနယ်ဇင်း; ဝဲလ်, နယူးဂျာစီ: 1988 ။ စစ။ 207-224 ။
103 ။ Anagnostaras စင်ကာပူဒေါ်လာ, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ စိတ်ကြွဆေး၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုထိခိုက်မခံတဲ့: ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအားဖြင့်မော်ဂျူ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 1996; 110: 1397-1414 ။ [PubMed]
104 ။ et al Guillory လေး။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် neurotransmitter လျတ်အပေါ် conditional တားစီး၏ဆိုးကျိုးများ။ Soc ။ neuroscience ။ 2006 Abstr ။ 32, 483.3 ။
105 ။ Stewart က J ကို, Vezina P. Extinction လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖျက်သိမ်းပေမယ့်စိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန် sensitized နှမြော။ ပြုမူနေ။ ဆေးဝါးဗေဒ။ 1991; 2: 65-71 ။ [PubMed]
106 ။ et al Anagnostaras စင်ကာပူဒေါ်လာ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် psychomotor ာင်းအုပ်ချုပ် memory ဖြစ်စဉ်များ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 703-715 ။ [PubMed]
107 ။ et al Cortright JJ ။ နီကိုတင်းမှယခင်ထိတွေ့နီကိုတင်း-ဆက်စပ် Contextual လှုံ့ဆော်မှုမှတဆင့်စိတ်ကြွဆေးများမက်လုံးပေးစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုပိုကောင်းစေပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2012; 37: 2277-2284 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
108 ။ et al Neugebauer မိုင်။ နီကိုတင်း-ဆက်စပ် Contextual လှုံ့ဆော်မှုများ၏အလှူငွေ: နီကိုတင်းဖို့ exposure ယင်း၏နောက်ဆက်တွဲ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2014; 260: 155-161 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
109 ။ et al Wray JM ။ nondependent ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် cue-တိကျတဲ့တဏှာ၏ပြင်းအားနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2013 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PubMed]
110 ။ et al Andrews က MM ။ အရက်များအတွက်အပြုသဘောဆောင်တစ်ဦးချင်းစီမိသားစုသမိုင်း Impulse အချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 69: 675-683 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
111 ။ et al Schneider က S ။ စွန့်စားမှုဆည်းပူးနေနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆုလာဘ်စနစ်က: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမှအလားအလာဘုံ link ကို။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 169: 39-46 ။ [PubMed]
112 ။ et al Yau W-YW ။ precursive အပြုအမူအန္တရာယ်နှင့်တစ်သက်တာအရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူဆက်ဆံရေး: နျူကလိယအရက်သမားသားအတွက်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုမျှော်လင့်တုံ့ပြန် accumbens ။ ဂျေအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2012; 32: 2544-2551 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
113 ။ et al ကော့သည် SM ။ လူသားများတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး intranasal မှ Striatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 15: 846-850 ။ [PubMed]
114 ။ et al Casey KF ။ စွဲလမ်းများအတွက် ultra-high အန္တရာယ်မှာဘာသာရပ်များအတွက်စိတ်ကြွဆေးလျှော့ချ dopamine တုံ့ပြန်မှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013 အောက်တိုဘာ 16; 2013 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PubMed]
115 ။ Schultz ဒဗလျူ dopamine ဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း။ Curr ။ Opin ။ Neurobiol ။ 2013; 23: 229-238 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
116 ။ Toates အက်ဖ်လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; ကင်းဘရစ်, ဗြိတိန်: 1986 ။
117 ။ Stewart က J ကို, ပညာရှိ RA ။ ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုအလေ့အထများ၏ Reinstatement: မော်ဖင်းအကိုက်ညွန်ပြခြင်းနှင့် naltrexone စိတ်ဓာတ်မျိုးသုဉ်းပြီးနောက်တုံ့ပြန်သက်တမ်းတိုး။ Psychopharmacology ။ 1992; 108: 79-84 ။ [PubMed]
118 ။ et al Hutcheson DM ။ ဘိန်းဖြူစွဲထဲမှာဆုတ်ခွာ၏အခန်းကဏ္ဍကို: ဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားခြင်းကိုအားပေးအားမြှောက်? နတ်။ neuroscience ။ 2001; 4: 943-947 ။ [PubMed]
119 ။ Minhas M က, Leri အက်ဖ်ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြန်လည်စတင်အပေါ်ဘိန်းဖြူမှီခိုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေး Alc ။ မူတည်တယ်။ 2014 http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2014.01.007။ [PubMed]
120 ။ Setiawan အီး, et al ။ မှီခိုမှုအတွက်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပါးစပ်အရက်အောက်ပါ differential striatal dopamine တုံ့ပြန်မှု။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2013 EPub ။ [PubMed]
121 ။ et al Lovic V ကို။ Impulse ကြွက်များလျော့နည်းမိခင်ဖြစ်ကြသည်။ dev ။ Psychobiol ။ 2011; 53: 13-22 ။ [PubMed]
122 ။ et al Kosten က TA ။ မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင်ဝယ်ယူ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2000; 875: 44-50 ။ [PubMed]
123 ။ et al Meaney MJ ။ mesolimbic dopamine စနစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်တစ်ခု neurobiological ယန္တရား? Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 127-138 ။ [PubMed]
124 ။ et al Lomanowska လေး။ မလုံလောက်အစောပိုင်းလူမှုရေးအတွေ့အကြုံလူကြီးအတွက်ဆုလာဘ်-related တွေကို၏မက်လုံးပေး salience တိုးပွားစေပါသည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2011; 220: 91-99 ။ [PubMed]
125 ။ et al Antelman သည် SM ။ ာင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကြွဆေးများ Interchange ။ သိပ္ပံ။ 1980; 207: 329-331 ။ [PubMed]
126 ။ Leyton M က, ထပ်ခါတလဲလဲ footshock မှ Stewart ကဂျေ Pre-ထိတွေ့မှုစနစ်တကျမော်ဖင်းအကိုက်ထံမှ locomotor လှုပ်ရှားမှု sensitizes နှင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နျူကလိယစိတ်ကြွဆေး accumbens ။ PBB ။ 1990; 37: 303-310 ။ [PubMed]
127 ။ Kalivas PW, မော်တာလှုပ်ရှားမှု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ Stewart ကဂျေ Dopamine ဂီယာ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1991; 16: 223-244 ။ [PubMed]
128 ။ et al နယ်လ်ဆင် EC ။ licit နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါး-related ရလဒ်များအဘို့ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အန္တရာယ်များကို: တစ်ဦးကအမွှာလေ့လာမှု။ Psychol ။ Med ။ 2006; 36: 1473-1483 ။ [PubMed]
129 ။ et al Conrod PJ ။ ဆယ်ကျော်သက်အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်များအတွက်ရွေးချယ်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-ပစ်မှတ်ထားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်၏ထိရောက်မှု: တစ်စပျစ်သီးပြွတ်ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 70: 334-342 ။ [PubMed]
130 ။ et al Volkow ND ။ သူတို့ကိုကင်းတွေကိုနှင့်အတူဒွန်တွဲနေကြသည်မဟုတ်လျှင် striatum အတွက် Dopamine တိုးကင်းချိုးဖောက်တဏှာထုတ်ယူကြပါဘူး။ NeuroImage ။ 2008; 39: 1266-1273 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
131 ။ et al Steeves TDL ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူ Parkinsonian လူနာတိုးပွားလာ striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်: တစ် [11C] raclopride ပေလေ့လာမှု။ ဦးနှောက်။ 2009; 132: 1376-1385 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
132 ။ et al Joutsa J ကို။ Mesolimbic dopamine လွှတ်ပေးရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ NeuroImage ။ 2012; 60: 1992-1999 ။ [PubMed]
133 ။ et al ဝမ် GJ ။ မူးရူးစားရောဂါအတွက်အစားအသောက်ဆွစဉ်အတွင်း striatal dopamine လွှတ်ပေးရန် Enhanced ။ အဝလွန်ခြင်း။ 2011; 19: 1601-1608 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
134 ။ et al Boileau ငါ။ Vivo အတွက် ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်သက်သေအထောက်အထား: အတူ positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု [11ကို C] - (+) - PHNO ။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013 Doi: 10.1038 / mp.2013.163 ။ [PubMed]
135 ။ Broft တစ်ဦးက, et al ။ bulimia nervosa အတွက် Striatal dopamine: တစ်ပေပုံရိပ်လေ့လာမှု။ int ။ ဂျေစားပါ။ disorders ။ 2012; 45: 648-656 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
136 ။ et al Linnet J ကို။ ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေ၏ ventral striatum အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ Acta Psychiatrica Scandinavica ။ 2010; 122: 326-333 ။ [PubMed]
137 ။ et al Linnet J ကို။ dopaminergic neurotransmission နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက်အိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အကြားပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့။ Scand ။ ဂျေစိတ်ပညာ။ 2011; 52: 28-34 ။ [PubMed]
138 ။ Martinez: D, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုအတွက် dopamine ဂီယာ Imaging: neurochemistry နှင့်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အကြား link ကို။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 168: 634-641 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
139 ။ et al ဝမ် GJ ။ dopamine လှုပ်ရှားမှုစိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက် relapse ဟောကိန်းထုတ်လျော့နည်းသွားသည်။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 17: 918-925 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
140 ။ et al Schmitz JM ။ ကိုကင်းကုသမှုများအတွက်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် levodopa-carbidopa: သုံးအပြုအမူပစ်မှတ်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacology ။ 2010; 18: 238-244 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
141 ။ le Foll B, မူးယစ်ဆေးစွဲကုသမှုများအတွက် Boileau ဗြဲ Repurposing buspirone ။ int ။ J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2013; 16: 251-253 ။ [PubMed]
142 ။ Steensland P ကို, et al ။ အဆိုပါ monoamine stabilizer (-) - OSU6162 နျူကလိယ accumbens အတွက်မိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်အီသနော-သွေးဆောင် dopamine output ကို attenuates ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012; 72: 823-831 ။ [PubMed]